Fanondranana biby an-tsokosoko :: Nanonona anarana polisy ilay zandary migadra noho ny halatra sokatra • AoRaha
Mivoatra ny raharaha tamin’ny fahatraran’ny polisy, tany Fianarantsoa, ny zandary iray nitondra sokatra miisa telo amby roapolo, tamin’ny 29 aogositra lasa teo. Manahy ny amin’ny mety nakan’ny polisy nisambotra azy ireo sokatra sasany izay nolazain’ilay zandary fa nentiny kanefa tsy hita ny mpanao famotorana. Sokatra miisa sivy amby efapolo no nolazain’ilay zandary fa nentiny avy any Toliara kanefa telo amby roapolo sisa no tonga tany amin’ny Fitsarana.
Nilaza itsy zandary itsy tamin’ny fanadihadiana nataon’ny Fitsarana taminy fa sivy amby efapolo ireo sokatra nampitondrain’ny olona azy avy any Toliara. Nanome baiko ny hisavana ny tranon’ny polisy nahasarona ireo sokatra tany amin’iry zandary iry ny Fitsarana any Fianarantsoa.
“Ireo telo amby roapolo ireo no biby tra-tehaka tany amin’io zandary io. Nanaovany sonia tato aminay izany mialoha ny nakan’ireo mpanao famotorana azy. Nanao sonia izany koa ny manamboninahitra zandary iray, izay naka ny namany sy ireo biby taty aminay”, hoy kosa ny avy amin’ny Polisim-pirenena any Fianarantsoa raha nanontaniana momba an’izao tranga izao.
Avy any Toliara ilay zandary Kilasy voalohany no nikasa hihazo an’Antananarivo ka voasavan’ny polisy ny fiara nitondra azy, teo Ankidona. Tra-tehaka niaraka taminy ireo sokatra miisa telo amby roapolo. Nomen’ireo polisy ny zandary misahana ny heloka bevava any an-toerana izy taorian’izay natao famotorana.
Natolotra ny Fitsarana tamin’ny sabotsy 31 aogositra ity mpitandro filaminana nahatrarana sokatra ity. Nanapa-kevitra ny hampiditra am-ponja azy vonjimaika ny Fitsarana taorian’izay.
Miasa any Mahajanga ilay zandary nahatrarana ireo biby tsy azo entina mivoaka ny faritra misy azy ireo. Nilaza izy tamin’ny fiarovan-tenany fa: “nampitondran’olona azy ireo biby ka nokaramaina roa hetsy ariary izy ho tambin’izany”, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana.
Fantatra tamin’ny loharanom-baovao hafa indray anefa fa fanindroany izao no tra-tehaka nitondra sokatra io zandary miasa any Mahajanga io. Tamin’ny taona 2014 ny voalohany nahatrarana azy tao Ihosy tamin’ny sakana nataon’ny polisy ihany. Naiditra am- ponja vonjimaika izy tamin’izay.